2019-08-06 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-06 20:40:59 ,TENET Classis Brand Design Fas…
TENET Classis Brand Design Fashion Wear
အမျိုးသား ဝတ်ရှပ်အကျီင်္ Company မှ
(1)#Driver(M)2Post ယာဉ်မောင်း ၂ ဦးအလိုရှိပါသည်။
👉 အသက် ၂၅ မှ ၄၀နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
👉 ယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။
👉 ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
👉 $လစာ ညှိုနိုင်း
လျှောက်ထားသူများသည် အထက်အပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်။
အမှတ် (၅၈)၊ ဟင်္သာတလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(ဆက်သွယ်ရန်။ ၀၁-၅၀၁၄၇၂၊ ၀၉-၄၂၀၃၁၅၂၅၂၊ ၀၉-၇၈၅၁၀၅၁၈၈)
အထက်ပါ Position များအားစိတ်ဝင်စားပါက
Mail-( tenet.th@gmail.com) , သို့cv form များ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် ရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
အသေးစိတ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက ၀၁-၅၀၁၄၇၂၊ ၀၉-၄၂၀၃၁၅၂၅၂.
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-08-06 by admin.
2019-08-06 20:40:37 ,b.com
Senior Accountant (1) ဦးအလိုရှိပါသည်
(For Trading Company)
B.com/LCCI Level -3 ပြီးရမည်.
English (4-skills intermediate)level ရှိသူဖြစ်ရမည်.
လုပ်ငန်းခွင်တွင် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် . . .
Trading Company တစ်ခုခု တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
Sat + Sun + Public Hoildays ရုံးပိတ်ပါသည်
StrongForce Trading Co.,Ltd
No – 334-344 , Room No -603 ,ပုဂံအိမ်ရာ , အနော်ရထာလမ်း , လမ်းမတော် မြို့နယ် .
htooeaindralinn1998@gmail.com သို့ CV form Email ပို့၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
2019-08-06 20:40:19 ,***အလုပ်ရှာဖွေနေပါသလား? Ruby …
1.ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ အခြေစိုက်လုပ်ငန်းအတွက် (1) Admin Assistant M(3)Posts – လစာ -150000- 200000 – လုပ်ငန်းအမျိုးအစား Export & Import Company – ဘွဲ့ရ၊ Computer basic အသက် – (၂၇)အောက်
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ည(၆း၀၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်ပါသည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – မလိုပါ။ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 8.8.2019(ကြာသာပတေးနေ့)မနက်(၁၀)နာရီ
2.သာကေတမြို့နယ်ရှိ အခြေစိုက်လုပ်ငန်းအတွက် (1) General Worker M(5)Posts – လစာ – 130000-150000 – လုပ်ငန်းအမျိုးအစား Fiberလုပ်ငန်း – ပညာအရည်အချင်း – မလို – အသက် – (၂၀)အထက် (၃၅)အောက်၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉း၂၀)နာရီမှ ညနေ(၆း၂၀)နာရီထိ
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – မလို – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 9.8.2019(သောကြာနေ့) မနက်(၁၀း၀၀)နာရီ
3.အလုံမြို့နယ်ရှိ အခြေစိုက်လုပ်ငန်းအတွက် (1) Restaurant Manager M/F(1)Posts – လစာ – 350000-500000 – လုပ်ငန်းအမျိုးအစား စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း – ဘွဲ့ရ၊ Food & Beverage Certificate ရှိသူဖြစ်ရမည်။ – အသက် – မကန့်သက်
– အလုပ်ချိန် – Nego
– အလုပ်ပိတ်ရက် – Nego
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၂)နှစ် (စားသောက်ဆိုင်ပိုင်း) – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 8.8.2019(ကြာသာပတေး)မနက်(၁၀း၀၀)နာရီ
(1) Senior Account F(2)Posts – လစာ – 200000 – 300000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ LCCI Level III(Local) – အသက် – (၂၀)အထက်၊ (၃၀)အောက်
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)ညနေ(၆)
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၂)နှစ် – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 8.8.2019(ကြာသာပတေးနေ့)နေ့လယ်(၁၁း၀၀)နာရီ
5.မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိ အခြေစိုက်လုပ်ငန်းကြီုးအတွက် (1) Sale F( 5)Posts – လစာ – 150000 – 200000 – လုပ်ငန်းအမျိုးအစား – Electronic ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း – ဘွဲ့ရ ၊ အသက်(၃၅)အောက်၊ Single ဖြစ်ရမည်။
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၆း၀၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပက်တစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။ – လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – မလို – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 8.8.2019(ကြာသာပတေး)မနက်(၁၀)နာရီ
6.မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင် Distributionလုပ်ငန်းအတွက် (1) Computer Account M(3)Posts – လစာ – 150000 ~ 200000 – (၁၀)တန်း၊ ဘွဲ့ရ၊ အသက် (၂၀)အောက်
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၀၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။ – လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၁)နှစ် – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 8.8.2019(ကြာသာပတေး)မနက်(၁၀)နာရီ
7. လသာမြို့နယ်ရှိ Private School ကြီးအတွက် (1) Preschool Teacher F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊English Basic ,အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းစနေနေ့တစ်ဝက်+တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (7.8.2019)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ(၃း၃၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
2. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Hotel ကြီးအတွက် (1) Customer Service M/F(3)Posts
– လစာ 350,000 – 500,000 – ဆယ်တန်း၊Chinese Speaking ပြောနိူင်သူ – အသက်(၄၀)အောက်
(2) Housekeeping M/F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၆)လရှိသူ – အသက်(၃၀)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (7.8.2019)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
8.သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Computer Accessories & Distribution လုပ်ငန်းကြီးအတွက် (1) Sale F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၃)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ည(၆)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (7.8.2019)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
9.ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Office Automation Equipment & Furniture Company ကြီးအတွက် (1) Marketing Staff F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၂၀ – ၃၅)ကြား၊ – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉း၃၀)နာရီမှ ည(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (8.8.2019)ကြာသပတေးနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
10.မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ Ruby Job Agency ကြီးအတွက် (1) Office Staff M/F(10)Posts
– လစာ 150,000(အစမ်းခန့် ၃လ)
– 170000(အမြဲတမ်းခန့်ဝန်ထမ်း) – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံမလို – အသက်(၂၅-၃၅)ကြား – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ည(၅)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းစနေနေ့တစ်ဝက်+တနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (8.8.2019)ကြာသပတေးနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
11.ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ Printing Service Company ကြီးအတွက် (1) Office Staff M/F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် LCCI Level II – အသက်(၂၂ – ၃၈)ကြား၊ (2) Graphic Designer M/F(3)Posts
– လစာ 250,000 – 350,000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်၊ – Photoshop ကျွမ်းကျင် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ည(၅း၃၀)နာရီထိ
ရုံးလိပ်စာ – အမှတ်(၂/၄) ၃လွှာ(၀ဲ)၊သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် မြရာကုန်းလမ်းထောင်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။(သိမ်ဖြူစာတိုက်မှတ်တိုင်ဆင်းပါ)
2019-08-06 20:40:08 ,#Accoutant
2019-08-06 20:40:05 ,#GraphicDesigner
2019-08-06 20:39:47 ,မန္တလေးမြို့ရှိ Electrical Comp…
မန္တလေးမြို့ရှိ Electrical Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်။
Marketing Manager – Male / Female
-လစာ – ညှိနှိုင်း
ဆက်သွယ်ရန် – 09750108883/4
CV form တင်ရန် (Viber) – 09750108883
2019-08-06 20:38:25 ,FGM Agencyနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော …
☂️FGM Agencyနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပြည်လမ်း ရှိ Mobile Phone Companyကြီးတစ်ခုအတွက်ဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်♥︎
☂️(1) Service Technician 👨‍🔧
-Computer Basic ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်
-Touch သီးသန့် LCD သီးသန့်လဲလှယ်ပေးခြင်း၊Speaker လဲခြင်း၊Camera လဲခြင်း၊Body Frame လဲလှယ်ခြင်း၊Junior technicians တို့မှဖြေရှင်းပြီးသောအလုံးများအားပြန်လည်စစ်ဆေး၍ error ကင်းစင်ကြောင်းထပ်မံ approve ပြုလုပ်ပေးရမည်
-လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်သောတာဝန်များကို Supervisor,Executive,Technicians Manager များသို့ Report ပေးနိုင်ရမည်
☂️(2)Customer Service Staff 👩‍💼 👨‍💼
-Computer Excel နှင့် မြန်မာ Font ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်
-Service ပြုလုပ်ရမည့် Phone များနှင့် Service ပြုပြင်ပြီး Phone များအားလက်ခံခြင်းနှင့်စာရင်းရေးသွင်းခြင်းပြုလုပ်ရမည်
-Google Device & GSPN System အားအသုံးပြုပြီး Data Entry ပြုလုပ်ပေးရမည်♥︎
လျှောက်ထားလိုပါက 09961258771 ၏ Viber သို့ CVဖောင်ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်*(word fileဖြစ်ပါက Screen shotရိုက်၍ပို့ပေးပါ)
☂️စုံစမ်းရန် 09961258771 ♥︎
2019-08-06 20:37:33 ,UNICORN AMUSEMENT IS HIRING!! …
UNICORN AMUSEMENT IS HIRING!!
1.) Job Title: Shop Assistant
2.) Sex: Male/Female
3.) Age: 20-28
4.) Salary: 180,000 MMK – 200,000 MMK and attractive incentives
5.) Off day(Any day on weekdays depending on schedule)
6.) Location: KaBar Aye Ga Mone Pwint
– Previous work experience as shop assistant preferred
– Working hours: 9:30am – 9pm
1.) Job Title: Shop Supervisor
4.) Salary: 350,000 MMK – 450,000 MMK and attractive incentives
– Have relevant experience in marketing
– Able to be independent and display good leadership skills
Interested applicants please submit your completed CV to eugene@unicornmyanmar.com or contact Eugene (09-978810009)
2019-08-06 20:37:24 ,UNICORN AMUSEMENT IS HIRING!! …
2019-08-06 20:34:13 ,Yangon-Mandalay Railway Improv…
Yangon-Mandalay Railway Improvement Projectတွင်(Translator) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
Salary – (5Lakhs+ Transportation fee + overtime pay + JLPT allowance )
Bonus – ( onceayear)
■ English ( Business level ) &
Japanese (above N3 )
■MS Office (Word,Excel,Power point)
■Can travel outside Yangon
■Translating documents from (Burmese-English-Japanese) vice versa
■Acting as general translator as required
■Writing/Documenting minutes of meeting
■Other administrative tasks as required by administration manager
Working Hour – (8:00Am – 5:00PM)(Mon-Sat)
Location – Site office in Ywarthargyi
ဆက်သွယ်ရန် 09 772 322 515
If you're interested,please send your CV to
အခန်း(၆၀၅)၊၅ လွှာ၊အဆောင်(၁၇)၊MICT Park၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။